Iincwadi zeNtombikazi kaMariya ▷ ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Namhlanje siza kuthetha ngeendumiso kunye nezibongozo kumama wethu, owaziwa ngcono njenge Iincwadi kwiNtombikazi kaMariya. Kule posi uya kufumana yonke into oyifunayo malunga nale mibongo.
Fumana indlela emfutshane nekhuselekileyo yokusondela eBukumkanini bamazulu, kuMama wethu waseZulwini, kwiNtombikazi enguMariya.
1 Zithini iiNkcukacha zeNtombikazi kaMariya?
1.1 Imvelaphi yeeNkampani
1.2 Iincwadi kwiNtombikazi kaMariya
1.2.1 Iinkampani ezingakumbi
1.2.2 Iilitha ziyaqhubeka
1.3 Eminye imithandazo yokwenza ekugqityweni kweetani kwiNtombikazi kaMariya:
1.3.1 Isivakalisi 1
1.3.2 Isivakalisi 2
1.3.3 Isivakalisi 3
Zithini iiNkcukacha zeNtombikazi kaMariya?
Iileta zizisa indumiso, ukuzukiswa, kunye nokunyanzeliswa kumama wethu, iNtombikazi enguMariya. NgesiGrike, igama elithi litany okanye litanéia limela umthandazo wokuncenga, ofundwa ekupheleni kwe Ingcwele yeRosari, nokuba benza uguqulelo olufutshane okanye olude. Luhlobo lomthandazo olusebenzayo ukusisondeza kwiNtombi Enyulu enguMariya, umama wethu, kwaye kamva, ngaye, sisondela kunyana wakhe, iNkosi yethu uYesu Krestu.
Ngendlela efanayo, iitani zisebenza njengesikhumbuzo sokuba uMariya ngumama wethu kwaye uyindawo yokuzimela kubo bonke abathembekileyo kunye nomzekelo wethemba. Ngokwe-Directory kuhambo oluthandwayo kunye nokufundisa. Imigaqo nezikhokelo ", ezapapashwa ngo-2002, iitani zingachazwa njenge:" Iifom ze umthandazo kwiNtombi Enyulu UMariya, ehlelwe yimithandazo eyahlukeneyo ebhekiswe kwiNtombikazi enguMariya, ethi, xa ivakaliswa emva komnye, kuphume umthandazo obonakaliswa kukudumisa nokucela ixesha elide.
Kwiinkulungwane zokuqala zobuKristu iitani zaqala, kunye nezibhengezo ngexesha lomngcelele, phakathi kwabefundisi namarhamente. Ekuqaleni babebhekiswa kuThixo kuphela, kodwa kule minyaka idlulileyo ukubongozwa kuye kwabaNgcwele kwaye ngamanani amaninzi kwiNtombikazi kaMariya. Kwinkulungwane ye-XNUMXth, kwisicatshulwa seMainz ungabona iifayile ze litani kwiNtombikazi enguMariya amadala, kwaye kamva kwinkulungwane yeshumi elinesihlanu neshumi elinesithandathu yaqala ukuphindaphindeka litani kwiNtombikazi enguMariya.
I-1500-iitani ezininzi zenziwa kwingcwele yaseLoreto, e-Itali.
Ngo-1503-uPaul V uyalela ukuba iitani kufuneka ziculwe kuyo yonke imithendeleko yeNtombikazi kaMariya.
Ngo-1575-kuvela iitani ezitsha ezazidumisa iBhayibhile, zaduma, zaza zagubungela ezokuqala.
Ngo-1587-uPapa uSixtus V uyavuma ukuba iitani ezintsha zibanike ukuzonwabisa.
Ngo-1601-uPopu Clement VIII uyakwalela zonke iitani ngaphandle kwezo zifunyenwe kwiMissal, iBreviary nakwingcwele yaseLoreto.
1615 - I-Dominicans yayalela ukuba iitani kufuneka zibhengezwe rhoqo ngeMigqibelo nakweyiphi na indibano emva kwemithandazo.
Ukusukela ngalo mzuzu ukuya phambili, amabinzana adityaniswa kwiitani ezifana "noMama oMsulwa, uKumkanikazi weRosari eNgcwele, uKumkanikazi woXolo, uMama weNceba" phakathi kwabanye.
Nkosi, yiba nenceba.
Kristu, yiba nenceba.
UThixo waseZulwini uYise, -senzele inceba.
UThixo uNyana, uMhlawuleli wehlabathi,
UThixo uMoya oyiNgcwele,
UZiqu-zintathu Ongcwele, uThixo omnye.
Santa Maria, -sithandazele:
Umama oNgcwele kaThixo,
Intombikazi eNgcwele yeNtombi,
Umama wobabalo olungcwele,
Uninzi umama ococekileyo,
Umama uhlala eyintombi,
Umama weengcebiso ezilungileyo,
Intombi enyulu ifanelwe kukuhlonelwa,
Ntombi enyulu ifanele ukudunyiswa,
Unobangela wovuyo lwethu,
Isitya esibalulekileyo sokuzinikela,
Indawo yokusabela yaboni,
Ukumkanikazi wokuvuma izono,
Ukumkanikazi wabo bonke abangcwele,
U-Queen wakhulelwa ngaphandle isono sokuqala,
U-Queen wacinga ezulwini,
Ukumkanikazi weRosari eNgcwele,
IMvana kaThixo, esusa izono zehlabathi, -sixolele, Nkosi.
IMvana kaThixo, esusa izono zehlabathi, -Siphulaphule, Nkosi.
IMvana kaThixo, esusa izono zehlabathi, -senzele inceba.
Sithandazele, Mama Ongcwele kaThixo,
-Kwaye ukuze sibe kufanelekile kwizithembiso zeNkosi yethu uYesu Krestu.
Ukugqitywa kwe litani kwiNtombikazi enguMariya isivakalisi esilandelayo kufuneka senziwe:
«Siyakubongoza, Nkosi Thixo wethu, usiphe ulonwabo lwempilo engapheliyo, yomibini neyomzimba, kwaye ngokulamla okuhle kweNtombi enguMariya oyintombi kanaphakade,
Zive ukhuselekile kulusizi lwale moya yasemhlabeni, ukuze ube nakho ukonwabela uvuyo olungapheliyo. NgoKristu iNkosi yethu. Amen. «
Mariya oNgcwele, sithandazele. UMama oNgcwele kaThixo, iNtombi eNgcwele yeNtombi, uMama kaKristu, uMama weCawa.
Eminye imithandazo ekufuneka yenziwe ekupheleni kwe litani kwiNtombikazi enguMariya:
«Namhlanje sikhusela phantsi kokhuseleko lwakho olunenceba, Mama oyiNgcwele waseZulwini. Siyakucela ukuba umamele imithandazo yethu esiyifunda kuwe namhlanje. Nceda usisindise kubo bonke ububi kunye nengozi, O usikelelwe rhoqo iNtombikazi kaMariya. Sithandazele, Mama Ongcwele kaThixo, ukuze sikulungele ukufikelela kwaye sonwabele izithembiso zeNkosi yethu uYesu Krestu. Amen. «
«Siyakubongoza, Nkosi Somandla, ukuba usasaze ubabalo lwakho kuwo wonke umphefumlo wethu ukuze kuthi thina, abathi ngokubhengeza iNgelosi eNgcwele, babhiyozele ukuzalwa kukaNyana wakho ozukileyo uYesu, ngoNqweno noMnqamlezo wakhe, yiya eluzukweni lovuko lwakhe. NgeNkosi yethu uYesu Krestu. Amen. «
«Nkosi yam, Thixo wam, namhlanje sikucela sonke, abantwana bakho, ukuze usinike impilo, umphefumlo nomphefumlo. Ngokuthethelela uMama wethu ozukileyo, iNtombikazi enguMariya, sikucela ukuba ukhulule abantwana bakho kwiintlungu ezivela kule moya yasemhlabeni ubanike uvuyo loBukumkani baseZulwini. NgoYesu Krestu iNkosi yethu. Amen. «
Ukuba ulithandile eli nqaku, mhlawumbi unokuba nomdla kwi umthandazo wecoronavirus. Ukwazi ngakumbi malunga iincwadana kwiNtombikazi kaMariya, Ndiyakumema ukuba ubone le vidiyo ilandelayo: